Mogadishu Journal » 2 Qof Oo Ku Dhimatay Dabkii Shanaad Ee Ka Kaca Degmada Maxaas.
(mjournal):Labo qof ayaa ku geeriyooday dab saaka ka kacay dhul miyi ah oo hoos-taga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha maamulka degmada Mu’min Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in labada qof ay ku dhinteen dab ka kacay tuulooyinka Khayraanle, Dibbugal iyo Xalooshiley oo ka wada tirsan degmada Maxaas.
Mu’min wuxuu sheegay inuu sidoo kale dabku baabi’iyay tiro guryo aqallo Soomaali ah oo ay deggenaayeen qoysas reer miyi ah, ayna ku le’deen xoolo badan.
Wuxuu intaas raaciyay in lagu guuleystay daminta dabkii ka kacay tuulada Khayraanle, balse lagu guul-darreystay daminta dabkii qabsaday labada tuulo ee kale.
Lama oga sababta keentay inuu mar kale dab halkaas ka dhasho.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii saddex carruur ah ay ku geeriyoodeen dab ka kacay isla deegaanka.